XOG: Kullane Jiis oo loo magacaabay xil cusub | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida ay caddeynayaan xogo muhiim ah oo ay heshay Keydmedia Online, Agaasimaha Hay’adda NISA, Fahad Yaasiin, ayaa si hoose xil ugu magacaabay Agaasimihii Shaqaalaha Hay’adda NISA Cabdullaahi Kullane (Jiis) oo Jimcihii hore uu xilka ka xayuubiyay Ra’iisul Wasaare Rooble.
Sida ay maanta KON baahisay, Taliyaha Nabad-sugidda iyo Sir-doonka qaranka, Fahad Yaasiin, ayaa Cabaas Yacquub, u magacaabay xilkii Jimcahii na weydaaratay laga raacdeeyay Cabdullahi Kullane (Jiis), hayeeshee, waxaa soo baxaya xog sheegaysa in eedeysanaha Gedo ka soo jeeda loo magacaabay xil cusub.
Cabdullahi Kullane, (Jiis) ayaa loo magacaabay Kaaliye Sare oo dhinaca Sirdoonka & Amniga NISA ah, hayeeshee, waa la qariyay , waxaana kaliya la baahiyay magacaabidda Cabaas Yacquub.
Sidoo kale, shaqsi magaciisa lagu sheegay Cabdiwaaxid, ayaa loo magacaabay xilka Agaasimaha Guud ee Qorsheynta & Tiknoolajiyada NISA, oo laga qaaday Cabaas Yacquub.
Ujeedka, ay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, u soo celiyeen Kullane, ayaa lagu sheegay in Farmaajo uusan dooneyn in Kullane ka fogaado Madaxtooyada xilliga doorashada, isla markaana uusan ka dhexbixin ciidanka NISA.
Arrintaan ayaa abuuri karta is qabqabsi hor leh, waxaana horraanba la soo warinayaa isku dhac ka dhex qarxay Madaxweynaha Waqtigu ka dhamaaday Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble.
Keydmedia Online, waxaa hore u soo gaartay xog sheegeysa in Rooble, hor istaagay is badal uu Farmaajo codsaday in lagu sameeyo qaar ka mid ah Wasaaradaha, hayeeshee, Ra’iisul Wasaaraha ayaa arrinkaas ku tilmaamay mid wax yeelleyn kara howlaha xilliga kala guurka.
Guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, ayaa soo dhaweysay xil ka qaadistii Kullane Jiis, waxaana Rooble, laga codsaday inuu la xisaabtamo oo kaliya aan xil ka qaadis loogu ekeyn, waxaana laga dhur-sugayaa tallaabada uu RW Rooble qaado marka uu dib ugu soo laabto dalka.